आज : २०७७ कार्तिक ९ आइतबार / 25th October, 2020 [email protected]
२०७६ भदौ २१ शनिबार १६:२२:०० प्रकाशित
काठमाडौं- शनिबार बिहान साढे ८ बजे। कीर्तिपुर अस्पतालको बर्न सेन्टर। सिमोन्स वार्डको बेड नं ५ मा सुतिरहेकी छिन्, वीरगन्ज महानगरपालिका-३ छपकैयाकी १४ वर्षीया मुस्कान खातुन। नाम मुस्कान, तर अहिले उनको मुस्कान हराएको छ। हाँसो खोसिएको छ।
घटना सुन्नासाथ आमाबुवा दुवै घरमै रहेछन्। 'नसोचेको खबर सुन्नासाथ एकछिन त हाम्रो सातो नै गयो,' कीर्तिपुर अस्पतालमै छोरीको उपचारमा आएका मुस्कानका बुवा रसुल अलीले भने। अस्पताल पुग्दा छोरीको त्यो हालत देखेर कुन आमाबुवाको मन नरोला?
बुवा रसुलका अनुसार वीरगन्जबाट शुक्रबार बिहान ९ बजे एम्बुलेन्समा हिँडेका उनीहरु दिउँसो ३ बजे कीर्तिपुर अस्पताल आइपुगेका थिए। यहाँका चिकित्सकले खातुनको स्वास्थ्य जाँच गरेपछि अहिले सिमोन्सको क्याबिन वार्डमा राखिएको छ।
'मैले त्यो केटालाई सम्झाइबुझाइ गाली पनि गरेँ यस्तो नगर्नु भनेर। रिसको झोँकमा एक थप्पडसमेत हानेको थिएँ,' बुवा रसुल भन्छन्, 'केही दिनअघि पनि छोरीलाई 'अहिले जिस्काउने गरेको छ कि छैन' भनेर सोधेको थिएँ, छैन भनेकी थिई। के थाहा यस्तो प्लान बनाउँदै रहेछ।'
यस्तो घटना पहिले भारतमा हुने गरेको सुनिए पनि नेपालमा पनि देखिन थालेको रसुल बताउँछन्। 'समाज निकै असुरक्षित भइसकेको छ,' उनको माग छ, 'हाम्रो छोरीको यस्तो हाल बनाउनेलाई कडा कारबाही होस्। फाँसी होस्।'
आमा सहनाजका आँखा पनि रसाइरहेका देखिन्छन्। कुरा गरिरहँदा उनी छोरीको बेडतिर फर्किइरहन्थिन्। 'त्यसलाई त कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ ताकि मेरो छोरीको हालत अरुको छोरीको नहोस्। हाम्रो छोरीले पाएको पीडा अरुले भोग्न नपरोस्,' उनी भन्छिन्, 'छोरीले जति पीडा भोगेको छ, त्योभन्दा बढी अपराधीले भोगोस्। जिउँदै जल्नुजस्तो पीडा अरु के हुन्छ र?'
मुस्कानले आमाबुवालाई भनेकी रहिछन्, 'राम्रै पढाइ गरिरहेको छु। ठूलो भएर जागिर गर्छु र तपाईंहरुलाई धेरै सहयोग गर्छु।'
त्यो आशा रसुल र सहनाजमा अझै बाँकी छ। रसुल भन्छन्, 'पढेर ठूलो मान्छे बन्छु भन्थी। उपचारपछि कस्तो हुने हो। सरकारले उपचार खर्च हेरोस्, उसको पढाइमा सहयोग पुर्‍याओस्।'
डाक्टरकै अनुमतिका मैले उनीहरुसँग कुरा गरिरहेकी थिएँ। त्यहीबेला राउन्ड फलोअपका लागि आए डा अनुष राज कर्णिकार।
डा अनुषका अनुसार मुस्कानको शल्यक्रिया आइतबार हुनेछ। 'उनको अवस्था अहिले स्थिर छ तर खतरामुक्त भने होइन,' उनले भने।
शरीरमा पोलिएको घाउ त बिस्तारै ठिक होला मुस्कानको, तर भित्री घाउमा कहिले खाटो बस्ला? प्रेम प्रस्ताव नस्विकार्दा त्यसको मोल कहिलेसम्म मुस्कानजस्ता किशोरीहरुले चुकाउनुपर्ला? अनि छोरीहरुले कहिलेदेखि समाजमा सुरक्षित महसुस गर्न सक्लान्?
अस्पतालबाट निस्किएदेखि नै मलाई यिनै प्रश्नहरुले पिछा गरिरहेका छन्।
९. थप २६ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, मृतकको संख्या ७९१ पुग्यो
१०. बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई कोरोना संक्रमण